यसरी सुरू भयो 'यात्री' को यात्रा :: Setopati
यसरी सुरू भयो 'यात्री' को यात्रा
सुधिर भण्डारी काठमाडौं, पुस ९
अशिम पाण्डे। तस्बिरः नारायण महर्जन/सेतोपाटी
दुईवर्ष अगाडि नेदरल्यान्ड्सबाट नेपाल फर्कंदा अशिम पाण्डेसँग सपना मात्र थियो। नेपालमै गुणस्तरीय विद्युतीय मोटरसाइकल बनाएर देखाउने सपना। कर्म नेपालमै गर्न सकिन्छ भनेर बुझाउने सपना।
अशिमको त्यो सपना गत बिहीबार पूरा भयो। बिहीबार अशिमको 'यात्री डिजाइन स्टुडियो'ले 'यात्री' विद्युतीय मोटरसाइकल सार्वजनिक गर्‍यो। मोटरसाइकल धेरैले मनपराए।
सवारीसाधनप्रति यो लगाव उनमा विदेश गएर आएको होइन, नेपाल हुँदै कल्पना गरेको मोह हो।
२०४६ सालमा चितवन, भरतपुरमा जन्मिएका अशिम सानैदेखि काठमाडौंमा पढे। अनामनगरको अलाइन्स एकेडेमीबाट एसएलसी पास गरेर मल्पी इन्सिच्युटबाट 'ए लेभल' सके।
उनलाई त्यो बेलादेखिनै इन्जिनियरिङ पढेर अउडी, बिएमडब्लु, मर्सिडिज लगायत संसारभर चर्चित कम्पनीका डिजाइन स्टुडियोमा काम गर्ने रहर थियो।
'आफ्नै कम्पनी सुरू गर्छु भन्ने मलाई कहिल्यै लागेकै थिएन। गाडी-मोटरसाइकल डिजाइन गर्ने खत्रा डिजाइन स्टुडियोमा काम गर्ने रहर भने धेरै थियो,' ३० वर्षीय अशिमले उत्साहित हुँदै आफ्नो सपना बाँडे।
यस्तै हुटहुटी बोकेर उनी एरोस्पेस इन्जिनियरिङ गर्न नेदरल्यान्ड्स हानिए। इन्जिनियरिङ गर्दैगर्दा उनले २ वर्ष विद्युतीय सवारीसाधनको एउटा 'प्रोजेक्ट' गर्ने अवसर पाए।
'प्रोजेक्टमा हामीले सोचेर, त्यसको डिजाइन तयार गरेर, उत्पादन गरेर, परीक्षण गरेर संसारका एक सय ५० भन्दा धेरै विश्वविद्यालयसँग रेस गर्नुपर्थ्यो,' उनले भने।
यो त्यही समय थियो, उनको मनमा विद्युतीय सवारीसाधनको बिउ टुसाएको।
पछि स्नातकोत्तर पढ्ने बेला उनले 'हाइपर' कार निमार्ता कम्पनीको 'डोंकरभोर्ट' गाडीको एउटा विभागको डिजाइन टिममा काम गर्ने मौका पाए। त्यहाँ अशिमले औद्योगिकस्तरमै सवारीसाधन कसरी उत्पादन हुन्छन् भन्ने राम्रो जानकारी पाए।
'मलाई त्यही बेला लाग्यो, चार-पाँच जना मात्र चासो भएका मान्छे भए नेपालमै पनि सवारीको काम गर्न सकिन्छ,' उनले भने।
यो बेलासम्म उनको नेदरल्यान्ड्स बसाइ सात वर्ष भइसकेको थियो। सन् २०१५-१६ ताका नेपालमा 'स्टार्टअप' कम्पनीहरू उक्सिँदै थिए। उनी यस्ता कम्पनीबारे छापिएका समाचार नबिराई पढ्थे रे।
उनलाई पनि नेदरल्यान्ड्स बसाइमा सिकेका कुरा नेपालमा देखाउने हुटहुटी बढ्दै गयो। यो बेलासम्म उनमा विद्युतीय मोटरसाइकल बनाउने चाहना पलाइसकेको थियो। उनले त्यसको नाम पनि सोचिसकेका थिए- यात्री।
'यात्री शब्द त्यत्तिकै मेरो दिमागमा आयो र मन पनि पर्यो,' अशिमले भने।
अशिमले आफ्नो योजना अमेरिका, क्यालिफोर्नियामा रहेका आफ्ना दिदी–भिनाजुलाई सुनाए।
'समर्थन त थियो तर धेरै ठूलो काम भएकाले एकपटक सोच भन्नुभयो। म क्यालिफोर्निया नै गएर तीन महिना उतै बसेँ र उहाँहरूलाई बुझाएर राजी गराएँ।'
अशिम २०१७, नोभेम्बरमा नेपाल फर्किए। फर्किएपछि कम्पनी रजिष्ट्रार लगायतका कानुनी प्रक्रिया सके। अनि 'यात्री' सपना पूरा गर्न आफैं यात्री भए। देशका धेरै ठाउँ घुमे।
त्यो यात्राले उनलाई एउटा कुरा बुझायो- राम्रो विद्युतीय मोटरसाइकलको भविष्य राम्रो छ।
'विद्युतीय सवारी किन्न चाहनेले धेरै कुरामा यसै चित्त बुझाउनुपर्छ। त्यो हटाउन सके यसको बजार धेरै राम्रो छ भन्ने लाग्यो र उत्साह झनै बढ्यो,' उनले भने।
उनलाई एउटा राम्रो टोलीको खाँचो भयो। नेपाल आएको तीन महिनापछि 'टेड टक्स' कार्यक्रममा बोल्ने अवसर पाएका थिए। त्यही कार्यक्रम उनको योजनाको 'टर्निङ प्वाइन्ट' बन्यो।
त्यहाँ उनले आफ्नो योजनामा साथ दिने केही साथी भेटे। कम्पनीबाट सुरूआती चरणका केही साथी अलग्गिए पनि कनिस्क सुवाल, शुलभलाल श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, अशेष श्रेष्ठ, सार्थक शर्मा पौडेल र बत्सल पाण्डेले अशिमलाई साथ दिइरहेका छन्।
यो पनि पढ्नुस्ः सौरभ ज्योति बने नेपाली इलेक्ट्रिक बाइकको पहिलो ग्राहक
उनको सपनाले विस्तारै मूर्त रूप लिन थाल्यो। सन् २०१८, जुलाईसम्म त 'कन्सेप्ट' मात्र भएको उनी बताउँछन्। नोभेम्बरबाट भने व्यवहारिक रूपमै काम थाले। अशिम र उनको टोलीले मोटरसाइकलमा आवश्यक सबै पाटपूर्जा नेपालमै डिजाइन गरे।
उनका अनुसार यी पाटपूर्जा 'फाइभ एक्सिस सिएनसी' नामको विशेष मेसिनबाट बनाउनुपर्छ।
'मेसिन व्यवस्थापन र जडान (सेटअप) गर्नै करोड खर्च लाग्छ। हामीले विभिन्न देशमा लगेर बनाएर ल्यायौं,' उनले भने। आगामी वर्षमा यो सेटअप नेपालमै बनाउने उनको तयारी छ।
चितवनमा रहेको कम्पनीबाट २०१९, फेब्रअरीमा यात्रीको पहिलो मोडल 'भि १.०' बन्यो। उक्त मोडल उनीहरूले जुन महिनामा नेपालगञ्ज लगेर परीक्षण गरे। परीक्षणबाट उनीहरूलाई धेरै कुरा थाहा भयो, कमजोरी पत्ता लगाए।
पछि उनीहरूले 'भि १.१' मोडल बनाए। कमजोरी सुधार्दै, विशेषता थप्दै अन्ततः यही वर्ष नोभेम्बरमा 'भि २' तयार भयो।
'हामीले सरकारी निकायबाट अनुमति लिएर चितवनको मेघौली एयरपोर्टमा २६ घन्टा परीक्षण गर्यौं,' उनले भने, 'चार्ज गर्ने समयबाहेक ५ जनाले दिउँसो २ बजेदेखि भोलिपल्ट बिहान ४ बजेसम्म लगातार चलायौं।'
बिहीबार सार्वजनिक भएको 'यात्री' मोटरसाइकल त्यही 'भि २' मोडल हो।
३० किलोवाटको मोटर रहेको यो मोटरसाइकलमा ६ किलोवाट/आवरको ब्याट्री छ। यसले एकपटक पूरा चार्ज गर्दा २३० किलोमिटरसम्म जान सकिने अशिम बताउँछन्। पूरा चार्ज गर्न २ घन्टा लाग्छ। अझै कम समयमा चार्ज होस् भनेर उनीहरू 'फास्ट चार्जिङ'बारे पनि अध्ययन गर्दैछन्।
'उत्पादन हुने बेलासम्म फास्ट चार्जिङको काम पनि पूरा हुन्छ। हाम्रो योजना २० मिनेटमा चार्ज गराउनु हो,' उनले भने, 'विद्युतीय सवारीको समस्या भनेकै भनेका बेला, भनेका ठाउँमा स्वाट्ट हिँड्न नपाउनु हो। फास्ट चार्जिङले त्यो समस्या हटाउँछ।'
बिक्रीका लागि पहिलो चरणमा उनीहरू ५० वटा मोटरसाइकल बनाउँदैछन्। ती मोटरसाइकल ग्राउन्ड क्लियरेन्स (सवारी र सडकको दुरी) लगायत केही 'फिचर'मा थप सुधार गरिने उनले बताए। बिक्रीपछिको सेवामा गुनासो नहोस् भनेर थोरै उत्पादन गर्न लागेको उनी बताउँछन्। यसको मूल्य भने बिक्रीकै बेला तय हुने उनी बताउँछन्।
सन् २०२० बाट सर्वसाधारणलाई 'टेष्ट राइड' दिने घोषण समेत उनीहरूले गरिसकेका छन्। २०२१ बाट धेरै उत्पादन गरेर नेपालबाहिर मोटरसाइकल निर्यात गर्ने अशिमको योजना छ।
योजनाहरू बनाउँदै गर्दा अशिमले कानुनी समस्या भने झेल्नुपरेको छ। नेपालमा अटोमोबाइल उद्योग नभएकाले औद्योगिक सहयोग नभएको उनी बताउँछन्।
'आफ्नो डिजाइन अरूलाई बनाउन दिएर ल्याउँदा पनि भन्सारले मान्दैन। पाटपूर्जा भनेर ३०-३५ प्रतिशत कर लाग्छ,' अशिमले दुखेसो पोखे, 'तीन-चारपाङ्ग्रेका लागि पाटपूर्जा ल्याउँदा करमा केही सहुलियत रहेछ। दुईपाङ्ग्रेमा रहेनछ।'
'अहिलेसम्म यस्ता कम्पनी नभएर कर छुट नभएको होला। अब सरकारले केही सोच्छ कि,' उनी आशावादी छन्।
देशमै पहिलो विद्युतीय मोटरसाइकल बनाएर सार्वजनिक गरेका अशिम आफ्नो कम्पनीलाई मोटरसाइकल उत्पादकभन्दा पनि 'टेक' कम्पनी भन्न रूचाउँछन्।
काठमाडौंमा पनि कम्पनी विस्तार गर्ने योजना सुनाउँदै उनले भने, 'यो डिजाइन स्टुडियो हो। अहिले मोटरसाइकल बनाइरहेका छौं, पछि गाडी वा अरू केही हुन सक्छ।'
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस ९, २०७६
बजारबाट म्याद गुज्रिएका सामान उठाएर एक वर्ष थप्दै पठाउँथे बोथ्रा
युनेस्को फेलोसिप पाएकी ज्योतिले केमा खर्च गर्नेछिन् ५० हजार डलर?
रानीपोखरी मन्दिरमा ३३ तोला सुनको गजुर (फोटो फिचर)
६० वर्षपछि परराष्ट्रबाट मुख्यसचिव बनेका बैरागी
अख्तियार सुधार्ने पहिलो पाइला
डाक्टर गोविन्द केसीको औंठाछाप
‘राजदूत सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई थाहै दिनुभएन’
छोरी रुपा थापा
पोखरा किन घुम्ने जाने? मोनिता पौडेल